Premier League: Waa Kuma Tababaraha Maanta Shaqada Laga Caydhinayo? - Gool24.Net
Premier League: Waa Kuma Tababaraha Maanta Shaqada Laga Caydhinayo?
December 5, 2019 Abdiwahab A. Abeye
Mid ka mid ah kooxaha ugu waaweyn horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League ayaa la filayaa inay maanta shaqada ka caydhiso tababaraheeda, kaddib xili ciyaareed niyad-jab ah oo natiijooyin liita ay kooxdu urursanaysay.
Tottenham ayay ahayd kooxdii ugu horreysay ee macallinkeeda caydhisay oo shan sannadood oo uu xilka hayey Mauricio Pochettino subax hore warqadda shaqo ka saarista loo dhiibay, waxaana ku xigtay Arsenal oo Unai Emery oo 18 bilood laylinayey daaqadda ka saartay, halka Watford ay noqotay kooxda saddexaad ee dariiqaas raacday.
Hadal-haynta maalmihii ugu dambeeyey ayaa waxay ahayd midka uu noqonayo macallinka afraad ee xilkiisa waayaya, waxaana la isku hayey Ole Gunnar Solskjaer oo Manchester United ah iyo Marco Silva oo Everton ah, balse hadda ayay taasi kala caddaatay.
Maamulka kooxda Everton ayaa maanta iskugu imanaya shir ay go’aan kaga gaadhayaan tababarahooda kaddib markii ay Liverpool 5-1 kaga adkaatay xalay iyadoo marka horena uu culays weyn saarnaa.
Warbaahinta Ingiriiska ayaa heegan ugu jirta dhawaaq kasoo gaadha dhinaca Everton, waxaana haddaba lasii saadaalinaya ninka xilka ka beddelayya oo noqon doona David Moyes oo isagana hore looga caydhiyey Manchester United.
Moyes oo hore usoo layliyey Everton ayaa si ku-meelgaadh ah xilka ula wareegi doona, balse waxa la ogyahay inuu yahay tababare khibrad leh oo meel fiican soo gaadhsiiyey Everton ka hor intii aanu Manchester United uga wareegin sannadkii 2013-kii.
Marco Silva oo siddeed guul-darro ay kooxdiisu la kulantay 11-kii ciyaarood ee ugu dambeeyey ayaa la weydiiyey haddii shaqada laga eryayo, waxaana uu ku gaabsaday in isagu aanu ahayn qofka ku habboon ee jawaabta bixinaya, ayna tahay in la weydiiyo maamulka.